2011-09-18 ~ Myanmar Express
အစိုးရလုပ်သမျှကန့်ကွက်မယ် ၊ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်မယ် ၊ တားမယ်၊ဆီးမယ် အစိုးရကဆက်လုပ်လို့ မှားသွားရင် ငါတို့အစောကြီးထဲကပြောသားပဲလို့ပြောမယ် ၊ မှန်သွားရင် ငြိမ်နေ လိုက်မယ် ဒီအချိုးမျိုးကလူတိုင်းချိုးတတ်တယ်။ နေစမ်းပါဦး...မီးမလာတုန်းကလဲခင်ဗျားတို့ပဲအမျိုးမျိုး ပြောခဲ့ကြတာလေ...ဘာတဲ့ - အစိုးရမှာလုံးဝတာဝန်ရှိတယ် ။ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများနှင့်စာလျှင် အလွန်နည်းနေတယ် - မီးမလာလို့ မီးစက်တွေသုံးရ လို့စက်သုံးဆီကုန်တယ်၊ နားညီးတယ်၊ လေထု ညစ်ညမ်းတယ် - မီးခွက် ဖယောင်းတိုင်တွေသုံးရလို့ မီးဘေးအန္တရယ် စိုးရိမ်ရတယ် - ခလေးတွေ စာကောင်းကောင်းမကျက်ရ လို့ပညာရေး အတွက်ရင်လေးရတယ် - ကုန်ထုတ်လုပ်ရာမှာ မီးစက်တွေသုံးရ လို့ထုတ်လုပ်မှုစရိတ် ကြီးပြီးကုန်ဈေးနှုံးတွေတက်မယ် - မှောင်နေလို့ ဒုစရိုက်မှု များပိုလာမယ် ဆိုတာတွေလေ....မှတ်မိကြသေးလား ဒီတော့အစိုးရက အော်..ပြည်သူတွေတော့လျှပ်စစ်မီးတကယ်လိုနေပါလားဆိုပြီး ကမ္ဘာမှာအသုံးများနေတဲ့ ညူကလီယားကထုတ်မယ်ဆိုတော့လဲ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး ကန့်ကွက်တယ် ဒီတုန်းကလဲ ကန့်ကွက်တဲ့သူတွေ ပြန်ကြည့် ဒီလူတွေပဲ နောက်ဆုံး အစိုးရကအလျော့ပေးလိုက် ရတယ်...ခင်ဗျားတို့အော်ခဲ့တာတွေ မေ့ချင်ယောင်ဆောင်မနေနဲ့ ကျုပ်ပြန်ပြောပြမယ် - ဒါစစ် အစိုးရ အာဏာ တည်မြဲအောင်လုပ်နေတာ - လျှပ်စစ်ထုတ်တာ ဘန်းပြပြီး လက်နက်ထုတ်မလို့နေမှာ - မလုပ်တတ် မကိုင်တတ်နဲ့ ဓါတ်ငွေ့တွေ ယိုစိမ့်လာရင် လူထု ဒုက္ခရောက်မှာ - ဒီလိုနည်းနဲ့လင်းမဲ့ အစား အမှောင်ထဲမှာသာနေလိုက်ချင်တော့တာပဲ - ရုရှားကိုလဲ ပညာတော်သင်တွေ လွှတ်နေတယ်တဲ့ သေချာပါတယ်..ဒါလက်နက်လုပ်တော့မှာ... - ဒီလိုသာ လက်နက်တွေထုတ်မယ်ဆိုရင် ဒါ.. နိုင်ငံတကာ ဥပဒေတွေကို ချိုးဖေါက်တာပဲ - ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ကိုထိခိုက်မယ်.... ဆိုတာတွေလေ..အတိတ်မေ့ကုန်ကြပြီလား...... ဒီတော့အစိုးရလုပ်တဲ့သူက ရေအားကနေထုတ်တယ် ရေအားက ထုတ်ရင်တော့ ရေအရင်းအမြစ်တွေမှာ ဆည်တွေဆောက်ရ မှာပဲမဟုတ်ဘူးလား..ဒါဆိုရင် ဒီမြစ်ဆုံရဲ့တရားခံဟာ ခင်ဗျားတို့ပဲမဟုတ်ဘူးလား.. ဘာလို့ အစိုးရကိုလက်ညှုိးထိုးချင်နေရတာလဲ ဘာအခုမှ ဧရာဝတီကိုကယ်တင်ပါတွေ ဧရာဝတီကဖျားတာတွေ ၊ ငိုတာတွေလာလုပ်နေတာလဲ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကို ဘာမှမလုပ်တဲ့သူတွေ က အမျိုးမျိုးဝိုင်းကန့်ကွက်နေတဲ့တိုင်းပြည်မှ မဆင်းရဲရင် ဘယ်တိုင်းပြည်ဆင်းရဲမလဲ...ဒီတိုင်းပြည်မျိုးဒုက္ခမရောက်ရင် ဘယ်တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်မလဲ မြန်မာမြန်မာ ချင်း မစည်းလုံးသ၍ ဘယ်အစိုးရတက်တက် ခွေးဖြစ်နေဦးမှာပဲ.... ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားhttp://doctorsatephwar.blogspot.com/2011/09/blog-post_6846.html#moreMyanmar Express
ကုလသမ္မဂ္ဂ မှာ အီရန်သမ္မတ ပြောတဲ့ မိန့်ခွန်း
အီရန်သမ္မတ မာမွတ်ဒ် အမာဒနီဂျက်ဒ် (Mahmoud Ahmadinejad) ဟာ နယူးယောက်မြို့မှာ ကျင်းပနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံကြီးမှာ ကြာသပတေးနေ့က မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်မာမွတ်ဒ် အမာဒနီဂျက်ဒ် ဟာ အခု လက်ရှိ ကမ္ဘာမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အင်အားကြီးတဲ့ နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်နဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေက ထင်ရာစိုင်းနေကြပုံကို လူပုံအလည်မှာ ချပြခဲ့ပါတယ်။ မာမွတ်ဒ် အမာဒနီဂျက်ဒ် ပြောကြားနေတုန်းမှာပဲ အမေရိကန်နဲ့ ပြင်သစ် အပါအ၀င် တခြား အနောက် နိုင်ငံ အချို့က ကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံး နီးပါး အိဒြေ္တွရရ မထိုင်နိုင်ကြတော့ပဲ အစည်းဝေးခန်းထဲကနေ ထွက်ပြေးကြရပါတယ်။အီရန်သမ္မတ မာမွတ်ဒ် အမာဒနီဂျက်ဒ် ဟာ အမေရိကန်နဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေက စစ်ပွဲတွေနဲ့ ရန်စနေသလို ကမ္ဘာတ၀န်း စိတ်ဝမ်းကွဲပြားရေး ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပြီး အကြွင်းမဲ့ အာဏာရှင်စနစ်ကို ကျင့်သုံးနေတယ် ထုတ်ဖော် ပြောကြားသွားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ အထက်စီးဆန်တဲ့ အာဏာတွေကြောင့် ကမ္ဘာတလွှား စီးပွားရေးကပ် ဆိုက်ခဲ့ရသလို လူမှုရေး မညီမျှမှုတွေပါ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်လို့လည်း အပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာ အမာဒနီဂျက်ဒ်ဟာ အရင် ကုလသမဂ္ဂ ညီလာခံတွေမှာ သူပြောကြားခဲ့ဖူးသလိုပဲ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီးကို အနောက်တိုင်း ၀င်ရိုးတန်း နိုင်ငံတွေရဲ့ အာဏာစက်အောက်ကနေ ရုန်းထွက်ပြီး အသစ်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းဖို့ပါ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ အကြမ်းဖက် အတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကို အသုံးချပြီး အနောက်အင်အားကြီး နိုင်ငံတွေက အီရတ်နဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံတွေကို ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်တယ်လို့လည်း ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။မာမွတ်ဒ် အမာဒနီဂျက်ဒ် ရဲ့ မိန့်ခွန်းကို ကုလသမ္မဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော် က အားပေး ထောက်ခံ Myanmar Express
ဧရာဝတီကို ကယ်တင်ကြမတဲ့လား .......... (ပေးစာ - ၂၆)
အခုတလော လူခ ကြားကြားနေတယ်..... ဧရာဝတီကိုစတေးတော့မယ်တဲ့...တစ်ချို့တွေကလည်း .. ဧရာဝတီတော်လှန်ရေးလုပ်မယ်တဲ့....တစ်ချို့တွေကလည်း...၀န်ကြီးဇော်မင်းကို ဆဲကြတယ်......တစ်ချို့တွေကတော့...နိုင်ငံရေးဝင်ပြောကြတယ်....တစ်ချိုကတွေကလည်း..အမေစုကို တ ကြတယ်.....တစ်ချို့တွေကလည်း ...သံရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒပြကြမတဲ့.........အဲဒီအသံတွေကို လူခ အများကြီးကြားနေရတယ်....ဧရာဝတီအတွက် လူခ ၀မ်းနည်းတယ်.........................ဘယ်လိုကယ်တင်ကြမလဲ??????????????????ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့......ကဲ...............ကျွန်တော်တို့ ဧရာဝတီကို ဘယ်လိုကယ်တင်ကြမလဲ........???ဒီလို mail ထဲမှာ လျှောက်ပြောပြီးတော့ ကယ်တင်မှာလား ...?????Save The Ayeyarwaddy.... ဆိုတဲ့ တီရှပ်တွေ ၀တ်ပြီး ကယ်တင်မှာလား....??????Custom message မှာ ဧရာဝတီက ဖယောင်းတိုင်မဟုတ်ဘူးဟေ့ ဆိုပြီးရေးထားရုံနဲ့ကယ်တင်နိုင်မှာလား....????????????ကဲ....လျှောက်ပြောနေတာလဲများပြီ....လူခပြောချင်တာကတော့.............ဧရာဝတီကို ကယ်တင်ချင်ရင် ... Mail ထဲမှာ တောင်တစ်လုံးမြောက်တစ်လုံး လျှောက်ပြောမနေနဲ့......တီရှပ်လည်းဝတ်မနေနဲ့.. ( တီရှပ်စက်ရုံပိုင်ရှင်တွေက လုပ်စားတာ.. လျှောက်မလုပ်နဲ့ မြင်းလုံးနဲ့လှိမ့်နေဦးမယ်..)ရေဒီယိုကနေလည်း စကားတွေလျှောက်ပြောပြီးဖွမနေကြနဲ့တော့... ( ဖွလို့ဖြစ်ကြရင်လည်း သူတို့မသေဘူး... ဒီကလူတွေပဲသေတာ...)သူများဖွလို့လည်း လိုက်မယောင်ကြနဲ့..ကိုယ်ပဲသေမှာနော်..ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ် ... ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား....ကိုယ့်စာမေးပွဲကိုသာ အောင် အောင်ဖြေကြပါ.......
ဒီမိုကရေစီ( Democracy )
ဒီမိုကရေစီ၏ မူလစကားသည် ဂရိဘာသာစကား ဖြစ်ပါသည်။ ဒီမိုဆိုသည်မှာ လူအများဖြစ်ပြီး ကရေစီဆိုသည်မှာ အုပ်ချုပ်ခြင်းဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရရှိပါသည်။ လူအများအကျိုးအတွက် လူအများဆန္ဒအတိုင်း လူအများအုပ်ချုပ်ခြင်းဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရရှိပါသည်။ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်၏အစသည် လူထုပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအတွက် လူထု၏ အရည်အချင်း အဆင့်အတန်း မြင့်မားရန် လိုအပ်ပါသည်။ လူထုများအနေဖြင့် မိမိတို့၏အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်ကို သိတတ်လာစေရန် ပညာပေးမှုများ လိုအပ်ပါသည်။ လူတိုင်းပညာဗဟုသုတ တိုးပွားလာပြီး ဆင်ခြင်တုံတရား လက်ကိုင်ထား သည့်နိုင်ငံသူ ၊နိုင်ငံသားများဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲပစ်ရပါမည် ။ သို့မဟုတ်လျှင် ဒီမိုကရေစီဗန်းပြပြီး အုပ်စုဖွဲ့ ကိုယ်ကျိုးရှာမှုများ၊ မျိုးရိုးဗီဇ ကိုးကွယ်မှုများ ၊လူထုကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ကိုယ်ကျိုးအာဏာရယူမှုများ ၊ အထိန်းအကျောင်းမဲ့ မင်မဲ့စရိုက် ကြီးစိုးမှုများအောက်တွင် မွန်မြတ်သန့်ရှင်းသည့် ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ် ကွယ် ပျောက်သွားလိမ့်မည်။ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးရာတွင် အကြမ်းဖက်မှု လုံးဝကင်းရမည်။ လူတိုင်းသည် အခွင့်အရေးကို ရိုသေစောင့်စည်းသည်နှင့်အမျှ လူတိုင်းတာဝန်သိစေသည့် အယဉ်ကျေးဆုံး စနစ် ဖြစ်ပါသည်။ အကြမ်းဖက်သည့် မင်းမဲ့စရိုက်များသည် ဒီမိုကရေစီ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီ၏ အနှစ်သာရများကို လေ့လာသိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ဒီမိုကရေစီ၏ လူထု လွတ်လပ်မှုနှင့် တာဝန်များကို သိရှိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်၏ အနှစ်သာရများအနေဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားသည် ကိုတွေ့ရှိရပါသည် -(က)လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်မှု။ ။ ဒီမိုကရေစီရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဟာ အရာရာ တိုင်းမှာအမှန်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ပါပဲ။ အမှန်တရားနဲ့ အကောင်းဆုံးနည်း လမ်းဆိုတာ လူ့ဦးနှောက်က ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူဘယ် ၀ါရဲ့ ဦးနှောက်က ထွက်လာမယ်ဆိုတာ ကြိုတင်မသိနိုင်ဘူး ။ ဒါကြောင့် အမှန် တရားနဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေ ရရှိလာဖို့ လူတိုင်းဟာ မိမိတို့ရဲ့ ဦးနှောက်ကို အသုံးပြုပြီး လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ် ခွင့်ဆိုပြီး ပရမ်းပတာ ၊စည်းလွတ်ဝါးလွတ် တွေးခေါ်တာမျိုးဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လား လားမှ မလျော်ညီဘူး။ ဒီမိုကရေစီရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း အများအကျိုးရှိအောင်၊ မှန်ကန်မျှတအောင် တွေးခေါ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ အကျင့်သီလနဲ့ တွေး ခေါ်ကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။(ခ) လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုမှု။ ။ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုမှုမရှိရင် ဒီမိုကရေစီ ဆိတ်သုဉ်း သွားမယ်။ အများဆန္ဒအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အများသဘောကို သေသေချာချာသိအောင် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့် ပေးရမယ်။ ဒါပေမယ့် လွတ်လပ် စွာပြောဆိုခွင့်ဆိုတာ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ထင်ရာစိုင်းပြောတာမျိုး ၊အကျိုးရှိရှိ ၊မရှိရှိ ပြော တာမျိုးဟာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဖျက်ဆီးရာရောက်ပါတယ်။ မဟုတ်မမှန် မတရားတဲ့ စကားတွေကို ပြောဆိုခြင်းဟာ လွတ်လပ်မှုကို အကျိုးမဲ့စေတယ်။ ခြုံ ပြီးပြောရရင် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ရပ်အဖို့ အစိုးရဟာ ပြည်သူလူထုကို လွတ်လပ် စွာပြောဆိုခွင့် ပေးရတယ်။ ပြည်သူလူထုကြီးကလည်း မိမိတို့အချင်းချင်း လွတ်လပ် စွာပြောဆိုရာမှာ ရရှိထားတဲ့ လွတ်လပ်မှုတွေကို နိုင်ငံအတွက် တရားသဖြင့် အသုံး ပြုရတယ်။ အလွဲသုံးစားမပြုရ ၊လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဟာ ဟုတ် မှန်ပြီး အကျိုးရှိတဲ့ စကားမျိုးဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။(ဂ)လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်။ ။အသိအလိမ္မာ ၊ ဥာဏ်ပညာဟာ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ အသိအလိမ္မာ ဥာဏ်ပညာခေါင်းပါးတဲ့ ဒေသတစ်ရပ်မှာ ဒီမိုကရေစီမထွန်းကားနိုင် ၊ လူတိုင်းအသိဥာဏ် ၊အဆင့်အတန်း မြင့်ဖို့လိုပါတယ်။ လမ်းမှန်ကို စဉ်းစားနိုင်ရမယ်။ လမ်းမှန်ကို စဉ်းစားနိုင်မှ မှန်တဲ့ စကားကို ပြောနိုင်မယ်။ တရားနည်းလမ်းကျတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်မယ်။ ဒါမှ လူထု ဆန္ဒအမှန်ကို ဖော်ပြနိုင်မယ်။ လူထုကိုယ်စားလှယ် အစစ်အမှန်ကို ရွေးချယ်နိုင်မယ်။ ဒါကြောင့် လူထုအသိဥာဏ် တိုးတက်လာစေတဲ့ သတင်းစာ ၊ ဂျာနယ် ၊မဂ္ဂဇင်း စတာတွေကို လွတ်လပ်စွာရေးသား ထုတ်ဝေခွင့်ပြုတယ်။ အဲဒီရေးသားထုတ်ဝေ ခွင့်တွေ မလွတ်လပ်ရင် ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ဟာ တိမ်မြုပ်သွားနိုင်တယ်။ လူထုဆန္ဒ ဟာလည်း တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်။ စာရေးဆရာ ၊ သတင်းစာဆရာ များကလည်း လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီး ကလောင်သွားသမျှ လက် လွတ်စပယ်ရေးတာမျိုး ၊မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံရေးတာမျိုး ၊ အဂတိတရားလေးပါး လိုက်စားရေးတာမျိုး မပြုအပ်ပါ။ ပြည်သူလူထုအကျိုးရှိမယ့် အကြောင်းအရာတွေ သာ မကွယ်မထောင့် ၀ံ့ဝံ့စားစား ရေးရပါမယ်။ ပါတီနိုင်ငံရေးခေတ်မျိုးတွင် ပါတီ သံယောဇဉ်ထားပြီး မလိုတစ်မျိုး ၊လိုတစ်မျိုး မရေးသင့်ဘူး ။ သန့်ရှင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့ ရေးရမယ်။(ဃ) လွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်။ ။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ရပ်မှာ လွတ်လပ် စွာပြောဆိုရေးသားခွင့်သာမက လွတ်လပ်စွာနေထိုင်သွားလာ လုပ်ကိုင်စားသောက် ခွင့်ရှိသည်။ နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်း မပြုသမျှ ၊ သူတစ် ပါးရဲ့ လွတ်လပ်မှုကို မဖျက်ဆီးသမျှ ၊ မည်သူမဆို မိမိလုပ်လိုရာ မိမိသဘော အတိုင်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ဥပဒေကို အများဆုံးဖြတ်ထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လူတိုင်းလိုက်နာရတယ်။ ဒီဥပဒေတွေဟာ လူတိုင်းရဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်တဲ့ ဥပဒေတွေဖြစ်တယ်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာ စီတန်းလမ်းလျှောက် ခြင်း ၊ လူထုအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း စတာတွေကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရက ဥပဒေ နှင့်အညီ ခွင့်ပြုရတယ်။ ဥပဒေမဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိကြဘူး။(င)လူထုဆန္ဒ။ ။များရာနိုင်တိုင်း မှန်သလား၊ လူထုဆန္ဒဆိုတာလည်း မိမိပင်ကို ဥာဏ်နဲ့ ဒါတွေမှားတယ် ၊ဒါတွေတရားတယ် စတာတွေကို ခွဲခြားဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ အများဆန္ဒသာ ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပါတယ်။ အမှားအမှန်မသိတဲ့ အများဆန္ဒဟာ ဒီမို ကရေစီရဲ့ ဦးတည်ချက်ကို ပေါက်ရောက်မယ်မဟုတ်ဘူး ။ဒီမိုကရေစီနဲ့ ပိုလို့ပင် အလှမ်းဝေးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီဦးတည်ချက် ပေါက်ရောက်အောင်မြင်ဖို့ အတွက် ဒီမိုကရေစီထူထောင်ရာတွင် ပြည်သူလူထုကြီးရဲ့ လူမှုဘ၀လိုအပ်ချက်များ ရင့်မာပြည့်စုံလာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အသိအလိမ္မာ ၊ဥာဏ်ပညာ အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ကို လက် တွေ့ဘ၀မှာ မှန်ကန်စွာ ကျင့်သုံးလာနိုင်မယ် ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီ၏ ဖြစ်စဉ်ကို အကျဉ်းချုပ်လေ့လာမည်ဆိုလျှင် လွန်ခဲ့သည့် ဘီစီ (၇၅၀)ခန့် ဂရိမြို့ပြနိုင်ငံများတွင် စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမြို့ပြနိုင်ငံများတွင် အရွယ်ရောက် သည့် နိုင်ငံသားတိုင်း တိုက်ရိုက်စုပေါင်းဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်သည့် စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုခေတ်တွင် အေသင်နိုင်ငံ ငယ်သည် ဒီမိုကရေစီစနစ် အထွန်းကားဆုံးဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ အေသင်နိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို တိုက်ရိုက်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဟု ခေါ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အေသင်မြို့သူ ၊မြို့သားအားလုံးသည် ကျယ်ဝန်းသည့်တစ်နေရာတွင် စုရုံးတွေ့ဆုံပြီး မဲပေးဆုံးဖြတ်သည့်စနစ်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဂရိမြို့ပြ နိုင်ငံများတွင် ဒီမိုကရေစီထွန်းကားသည့် ကာလမှာ ကျေးပိုင်ကျွန်ပိုင်ခေတ် အဆင့်သာရှိပါသည်။ ထိုကာလ တွင် ဒီမိုကရေစီလွတ်လပ်ခွင့်ကို ကျွန်ပိုင်ရှင်များသာ ခံစားခွင့်ရှိပါသည်။ (ကျေးကျွန်များတွင် ဒီမိုကရေစီ မရှိပါ) လူတိုင်းတူညီသည့် အခွင့်အရေး မရရှိခဲ့ကြပါ။ ဤအပေါ်အကြောင်းပြု၍ ဒီမိုကရေစီသဘောတရားကို အနောက်ဥရောပနိုင်ငံများက လက်တွေ့ဘ၀နှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး အဆင့်ဆင့်ထူထောင်ကျင့်သုံးလာခဲ့ခြင်း ဖြစ် ပါသည်။ ယနေ့ ဒီမိုကရေစီနှင့် ဂရိမြို့ပြနိုင်ငံများတွင် စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သော ဒီမိုကရေစီတို့သည် လွန်စွာခြားနားပါသည်။ဒီမိုကရေစီဟူသော ဝေါဟာရ၏ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်သည် ပြည်သူတို့အုပ်ချုပ်သော အစိုးရဖြစ်ပါသည်။ ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်၍ အများဆုံးအသုံးပြုကြပါသည်။ ထိုအဓိပ္ပါယ်ကို အဓိကပြင်ဆင်ချက်အနေဖြင့် နိုင်ငံများအနေဖြင့် အုပ်ချုပ်မှုကို ဆောင်ရွက်ကြရာတွင် ပြည်သူ တို့က တိုက်ရိုက်မလုပ်ဆောင်ကြဘဲ ပြည်သူတို့က လွတ်လပ်စွာ အခွင့်အရေးတူညီသော အခြေခံစည်းမျဉ်းများ ဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း ခံရသော ကိုယ်စားလှယ်များက အုပ်ချုပ်မှုကို လုပ်ဆောင်ကြသည်ဟု ဖွင့်ဆိုနိုင် သည်။ အချုပ်မှာ ပြည်သူတို့က လွတ်လပ်စွာမဲပေး၍ ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်သော ကိုယ်စားလှယ်များက ဆောင်ရွက်ကြသော အုပ်ချုပ်မှုသာလျှင်ဖြစ်ပေသည်။ အကောင်းဆုံး ၊စံအမြင့်ဆုံး ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေး သည် အားလုံးသောပြည်သူတို့၏ အကြိုက်ကိုလိုက်၍ ဆောင်ရွက်သည်ဟု ဆိုရပေမည်။ ထိုသို့ ပြီးပြည့်စုံ သော စနစ်မျိုးဖြင့် အုပ်ချုပ်သောအစိုးရဟူ၍ မည်သည့်အခါမျှ မဖြစ်နိုင်ပေ။ သို့သော် ထိုအဖြစ်မျိုးကို အမြင့်ဆုံးစံအဖြစ်ထား၍ ထိုစံကို မီနိုင်သ၍မီရန် ဒီမိုကရေစီအစိုးရများ မည်မျှဒီမိုကရေစီ အနှစ်သာရကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်ဟူသော အချက်ကို စိစစ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ဆောင်ရွက်နိုင်သည်ဟူသော အချက်ကို စိစစ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးရာ၌ အောင်မြင်မှုအတိုင်းအတာသည် လွယ်ကူစွာ ခန့်မှန်း၍မရနိုင်ပေ။ မည်ရွေ့မည်မျှ အောင်မြင်သည်ဟူ၍ တိုင်းတာနိုင်ရန် အချက်သုံးချက် ရှိသည်။ ယင်း တို့သည် အုပ်ချုပ်မှုစနစ် မည်မျှခိုင်ခံ့သည် ၊ မည်မျှကြာရှည်ခံသည်ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူတို့မည်မျှ စိတ်ဝင်စားစွာ မဲပေးကြသည်ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာဖြစ်စေ ၊ အခြားနိုင်ငံ ရေးကိစ္စများမှာဖြစ်စေ အကြမ်းဖက်မှု ကင်းမကင်းဟုလည်းကောင်း ဖြစ်ပေသည်။ အတော်အသင့် ပြည်သူ့ ဆန္ဒကို လိုက်လျောသော ဒီမိုကရေစီမျိုးသည် အောက်ပါအာမခံချက် ရှစ်ချက်ရှိနေမှသာ တည်မြဲနိုင်ပေ မည် (က) အဖွဲ့အစည်းများကို လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင် ခွင့် ။ (ခ ) လွတ်လပ်စွာ မိမိ၏အာဘော်ကို ဖော်ပြနိုင်ခွင့် ။ (ဂ ) လွတ်လပ်စွာ မဲပေးနိုင်ခွင့် ။ (ဃ) ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းရာထူးအတွက် အရွေးခံနိုင်ခွင့်။ (င ) နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တို့အဖို့ မိမိ၏ပါတီကို ပြည်သူတို့ ထောက်ခံမဲပေး စေရန် အပြိုင်အဆိုင် မဲဆွယ်ခွင့် ။ (စ ) သတင်းများကို အစိုးရဌာနများမှအပ အခြားဌာနများထံမှ ရနိုင်ခွင့် ။ (ဆ) လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခွင့် ။ (ဇ ) အစိုးရမူဝါဒများကို ပြဌာန်းမည့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ မဲဆန္ဒနှင့် အခြားဆန္ဒ များပေါ်တွင် တည်ရှိနိုင်ခွင့် ။ဒီမိုကရေစီ အကြောင်းကို သေသေချာချာကျကျနန နားလည်းပြီး စည်းကမ်းပြည့်သည့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ဖြစ်ရေး အကြံပြုတင်ပြလိုက်ပါသည်။http://oppositeyes.blogspot.com/2008/05/democracy.html မှ ကူးယူဖော်ပြပါကြောင်းMyanmar Express
ဒုက္ခသည် စခန်းရောက် မျိုးချစ်ကရင် တစ်ဦးမှ ၂ နှစ် အရွယ် တူမလေးအား မုဒိမ်းကျင့်
ထိုင်းနိုင်ငံ ရတ်ချဘူရီခရိုင် စွန်ဖုမြို့နယ်အတွင်းရှိ ထမ်းဟင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် အသက် ၃၅ နှစ် အရွယ် ကရင် တစ်ဦးမှ ၎င်း၏ တူမ ဖြစ်သူ ၂နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးအား အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သည်။ မုဒိန်းကောင် မျိုးချစ်ကရင်၏ နာမည်မှာ စောကျော်ကပေ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုတော့ ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါပြီ။ထမ်းဟင်စခန်း ဇုံ(၃) ရပ်ကွက်(၁)တွင် နေထိုင်သူ အသက် ၃၅နှစ်အရွယ် စောကျော်ကပေမှ 19 ရက်နေ့ နေ့လည်က အရက်မူးကာ အိမ်ရှေ့တွင် ဆော့ကစားနေသည့် မိမိဇနီးဘက်မှ တော်စပ်သော အသက် ၂နှစ်အ ရွယ် တူမလေးအား နေအိမ်တွင်း ခေါ်ယူကာ အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တာ လို့ ထမ်းဟင်စခန်းလုံခြုံရေးမှ အတွင်းရေးမှူး စောဖိုးလယ်၏ ပြောပြချက်အရ သိရပါတယ်။ “သူ အရက်မူးပြီး အိမ်ပြန်လာတော့ သူ့တူမလေးက အိမ်ရှေ့မှာဆော့နေတာကိုတွေ့ပြီး အိမ်ထဲကိုခေါ်သွားတယ်။ ကလေးနဲ့ ကစားနေတဲ့ သူ့အဖော်တွေကလည်း ဘာမှမသိကြဘူး။ ခဏကြာတော့ ကလေးမလေးက ငိုပြီး ပြန်ထွက်လာတယ်။ အိမ်ကိုငို ပြီးပြန်လာတဲ့ ကလေးကို သူ့အမျိုးတွေက မေးကြည့်တော့ ကလေးကလည်း အရမ်းငိုပြီး လူကြီးတွေ ကိုင်တာတောင် မရဘူး။ အရမ်းနာနေတယ်။ နောက်တော့မှ ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို ပြောပြတယ်။” လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီ ကလေးကို စခန်းတွင်းရှိ ဆေးရုံမှာ သွားစစ်ဆေးကြည့်သောအခါ အဓမ္မကျင့်ခံထားရသည့် လက္ခဏာများ တွေ့ရှိရသဖြင့် နိုင်ငံတကာ ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီ(IRC)အဖွဲ့၏ အကူအညီဖြင့် စွန်ဖုမြို့နယ်ဆေးရုံသို့ ချက်ချင်း သွား ရောက်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြရပါတယ်။ ညနေ ၆နာရီအချိန်မှာတော့ အရက်မူးပြီး လူမှန်း သူမှန်း မသိ အိပ်ပျော်နေတဲ့ မျိုးချစ် ကရင် အောက်တန်းစား မုဒိမ်းကောင် စောကျော်ကပေကို သူ၏ နေအိမ်မှာပဲ ထိုင်းအာဏာပိုင်များက သွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ “အဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်း ၆နာရီအချိန်လောက်မှာ ထိုင်းပုလိပ် ၂ယောက်၊ ဒုက္ခသည်စခန်းဆိုင်ရာ ထိုင်းလုံခြုံရေး(အောစော်) ၁ ယောက်နဲ့ စခန်းလုံခြုံရေးအဖွဲ့က တာဝန်ရှိသူ ၂ယောက်က သူ့ကို ဖမ်းသွားပြီး စွန်ဖုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ ရဲစခန်းမှာ သွားပို့လိုက် ကြတယ်။”ဟု လို့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ စောကျော်ကပေ၏ မိသားစုဝင်များမှာ တတိယနိုင်ငံသို့ သွားရောက်နေကြပြီး ထိုသူများတွင်လည်း စောကျော်ပေ ကဲ့သို့ အကျင့်များ ရှိနိုင်သည် ဟု ဝေဖန်မှုများလည်း ရှိသည်။ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ အကျင့်ပျက်၊ အောာက်တန်းကျသူ အများအပြားသည် ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ပြီးနောက် နယ်စပ် ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် ခိုလုံနေတတ်ကြသည်။ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် အချင်းချင်း စည်းလုံးမှု မရှိကြသည့်အပြင် အချင်းချင်း အနိုင်ကျင့်နေတတ်ကြကြောင်း မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်းမှ အမည်မဖော်လိုသူ တစ်ဦးက အခုလို ပြောပါတယ်။"ပြောတော့ ဒုက္ခသည်တဲ့.. သူတို့လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေ ကြည့်ရင် သနားစရာ တစ်ကွက်မှ မရှိဘူး..ေ-ာက်ကျင့်တွေကလည်း အောက်တန်းကျတယ်.. ကိုယ့်တူမ ကိုယ်တောင် မုဒိန်းကျင့်တယ်.. ပြီးရင် အဲဒီ မုဒိန်းကျင့်ခံရတဲ့ တူမက စစ်တပ်က မုဒိန်းကျင့်တာပါဆိုပြီး တတိယ နိုင်ငံတွေကို ထွက်ဖို့ အသနား ခံကြတယ်... သူတို့တွေ လုပ်နေတာတွေက အရမ်း ကလေး ဆန်ကြတယ်.. ကျွန်တော် ဆိုရင် ရောက်နေတာ ကြာပြီ ခုထိ တတိယ နိုင်ငံ မပါသေးဘူး.. ကျွန်တော်က သူတို့လို စစ်တပ်က မီးရှို့ပါတယ်.. သမီးတွေကို မုဒိန်းကျင့်ပါတယ် ညာမပြောတတ်ဘူးလေ... ဒါကြောင့် ခုထိ မရောက်နိုင်သေးဘူး.. ကြာပြီ.. အရင်ရောက်သွားတဲ့လူတွေ အကုန်လုံးက မရိုးသားတဲ့လူတွေချည်းပဲ.. ဥပမာ စောကျော်ကပေ လို ကိုယ့် တူမ ကိုယ် မုဒိန်းကျင့်တတ်တဲ့ ကောင်မျိုးတွေနဲ့ စောကျော်ကပေ တူမလို့ ကိုယ့်အချင်းချင်း မုဒိန်းကျင့်ခံရတာကို စစ်တပ်က မုဒိန်းကျင့်ပါတယ် လို့ လိမ်ပြောတဲ့လူတွေ ချည်းပဲ.. " လို့ ပြောပါတယ်။ထမ်းဟင်ဒုက္ခသည်စခန်းမြန်မာဒုက္ခသည်တွေဟာ ထိုင်း၊ မလေးရှားအပါအ၀င်နိုင်ငံအတော်များများမှာရှိနေပါတယ်။ ထိုင်းအစိုးရက ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်သလို၊ UN နဲ့ တတိယနိုင်ငံတွေလည်းခေါင်းစားနေရပါတယ်။ လျှော့သွားတယ်မရှိ။ တိုးလာတာပဲရှိပါတယ်။ ဒီလူတွေက ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်ရေမှာနေရတာကို ဂုဏ်မယူချင်ပဲ သူများနိုင်ငံက သနားတဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြည့်ခံရတာကို ပိုပြီး သဘောကျသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အမေရိကန်အပါအ၀င်တတိယနိုင်ငံတွေကို ထွက်ဖို့ကျိုးစားနေတဲ့ လူတွေကတော့ ဘယ်တော့မှ ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်ရေကို တန်ဖိုးမထား ကြပါဘူး။ဒုက္ခသည် စခန်းမှ ဘောလုံးပွဲ ဒိုင်ခံသည့် အိမ်တစ်အိမ် တတိယ နိုင်ငံထွက်ဖို့ အလှပြင်လိုသူများ ပြင်နိုင်ရန်"ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေကလည်း အများအားဖြင့် တတိယနိုင်ငံတွေကိုထွက်နိုင်ဖို့အတွက် ၀င်ရောက်နေထိုင်တဲ့လူတွေများပါတယ်။ ဒီလောက်ဒုက္ခခံပြီး အကျင့်မကောင်းတဲ့လူတွေ စုနေတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေထဲမှာ ဘယ်သူမှမနေချင်ပါဘူး။ စခန်းထဲမှာနေရတဲ့ဘ၀က ထောင်ကျတာနဲ့သိတ်မကွာဘူး။ ထောင်ထဲမှာ လူမိုက်တွေ စုနေသလို၊ ဒုက္ခသည် စခန်းဆိုတာကလည်း မုဒိမ်းကောင်တွေ၊ ခိုး၊ ဆိုး သောင်းကျန်းသူတွေ စုနေတဲ့ နေရာပါပဲ။ဒုက္ခမှောင်ခိုဈေးကွက်ဖြစ်လာရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ အမေရိကန်အပါအ၀င် တတိယနိုင်ငံတွေကို ထွက်ခွာနိုင်ရေးဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဒီမှောင်ခိုဈေးကွက်ကိုအဓိကချယ်လှယ်တဲ့လူတွေထဲမှာ UNHCR က စကားပြန်တွေ၊ ထိုင်းအစိုးရရဲ့ စခန်းအာဏာပိုင်တွေ၊ စခန်းကော်မတီဝင်တွေ၊ သံရုံးတွေက စကားပြန်တွေပါဝင်ကြတယ်လို့ သိရတယ်။ တကယ်တမ်းအားမနာတမ်းပြောရရင် ဒုက္ခသည်ဆိုတာ ဒုက္ခသည်မဟုတ်တော့ဘူး။ လက်ချိုးရေလို့ရတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေပဲ အစစ်အမှန်ရှိတော့တယ်။ ကျန်တဲ့အများစုကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့အတွက် လုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်။ " လို့ သြောစတြေးလျနုင်ငံရောက် ဒုက္ခသည် ဟောင်း တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် မုဒိမ်းမှု၊ လူသတ်မှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုနှင့် လူကုန်ကူးမှု ပြဿနာများကို ထိုင်းနိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေအ တိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် ထိုင်းအာဏာပိုင်များထံ အပ်နှံလေ့ရှိပြီး ယခင်ကလည်း ထမ်းဟင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ဆယ် ကျော်သက် မိန်းကလေးကို ကျူးလွန်သည့် မုဒိမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးကြောင်း၊ အခြား မှတ်တမ်းမတင်ထားသော ခိုးမှု၊ ဆိုးမှု၊ လုယက်မှု ၊ နဲ့ မုဒိမ်းမှု ပေါင်း များစွာ ရှိကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ ဇုံ ၁၊ ၂၊ ၃ ဟူ၍ရှိပြီး ရပ်ကွက်ပေါင်း ၁၅ရပ်ကွက်ရှိသည့် ထမ်းဟင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် လက်ရှိအချိန်၌ ဒုက္ခသည်ဦးရေ ၈,၇၂၆ ဦးရှိသည်ဟု ကရင်ဒုက္ခသည်ကော်မတီ(KRC)၏ မှတ်တမ်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။Myanmar Express
တရုတ်စာတွေကို ဘာသာပြန် သည့် စာရေးဆရာမ ဘလော့ဂါ နိုင်းနိုင်းစနေ ကို အားပေးသူ များပြား
နိုင်းနိုင်းစနေ ဆိုရင် ဒီနေ့ အင်တာနက် သုံးနေတဲ့ လူတိုင်း သိကြပါတယ်။ အင်တာနက် စာမျက်နှာပေါင်းများစွာ၊ ဖော်ဝတ် မေးပေါင်းများစွာမှာ နိုင်းနိုင်းစနေ ရေးထားတဲ့ စာတွေ ကို အများကြီး တွေ့နိုင်ပါတယ်။နိုင်းနိုင်းစနေဟာ တရုတ်စာကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တက်မြောက်ထားပြီး တရုတ်စာဖြင့်ရေးသားထားသော စာအုပ်များ၊ ဝဘ်ဆိုက်များမှ စာကောင်းပေကောင်းများကို အမြဲ ဘာသာပြန်ပြီး ပိုစ့်တင်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်းနိုင်းစနေဟာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစတင်ပြီး ဘလော့ရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပြီး ယနေ့အချိန်အထိ www.99sanay.comတွင် ကြည့်ရှုသူအရေအတွက်(hits) ၂၅ သိန်းကျော် ရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် Facebook လူမှုကွန်ရက် ၀က်ဘ်ဆိုက်၌ ပြုလုပ်ထားသော fan page၌ ပရိသတ် ၁၄၈၇၅ ဦးရရှိထားခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘလော့၌ ရေးသားထားသောစာများကို စုစည်းထုတ်ဝေထားသည့် လုံးချင်းစာအုပ် ၁၁ အုပ်လည်း ထွက်ရှိထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘလော့ဂါတစ်ယောက်အဖြစ် ဘယ်လို စိတ်ကူးနဲ့ စာတွေကို စရေးဖြစ်ခဲ့လဲ။ အောင်မြင်ရေး နဲ့ တက်ကျမ်းဆန်တဲ့ ဘာသာပြန်စာတွေကို ဘာကြောင့် ဦးစားပေးရေးခဲ့ပါသလဲ။ လို့ မေးချိန်မှာတော့နိုင်းနိုင်းစနေက "အရင်တုန်းကတော့ စာဖတ်တာ ပဲ ၀ါသနာပါခဲ့တယ်။ အခုလို စာတွေ ရေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်း စိတ်ကူးမရှိခဲ့ဘူး။ စာတွေ ရှာဖတ်တော့ မြန်မာစာ တွေအပြင် ကိုယ်တတ်ကျွမ်းတဲ့ တခြားဘာသာက စာတွေလည်း ဖတ်ခဲ့မိတယ်။ အဲဒီမှာ ကိုယ်ဖတ်မိတဲ့၊ ကောင်းတဲ့စာတွေကို တခြားဘာသာ စကားမတတ် တဲ့၊ အားနည်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း မျှဝေချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ မြန်မာလိုကြိုးစား ဘာသာပြန်ကြည့်ရင်းက စာတွေစရေး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မိသားစုနဲ့ခွဲပြီး တခြားနိုင်ငံမှာ ကျောင်းသွားတက်တော့ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ဖို့ တက်ကျမ်းဆန်တဲ့ စာမျိုးတွေ ပိုရှာဖတ်ဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နှစ်သိမ့်၊ အားပေးတာမျိုး ပေါ့။ အဲဒီလိုစာတွေ ပိုဖတ်ဖြစ်တော့ အဲဒီလိုစာတွေကိုပဲ ပိုဘာသာပြန်ရေး ဖြစ်သွားတာပါ။ ဘလော့ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ စရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘလော့ စရေးတုန်းက နိုင်ငံခြား ရောက်နေပါတယ်။ အိမ်လွမ်းစိတ်ကြောင့်နဲ့လည်း ကိုယ့်မိသားစုအကြောင်း၊ ရွာအကြောင်း၊ ကိုယ့်ငယ်စဉ်အကြောင်းတွေ ရေးဖြစ် ပါတယ်။ ဘာရည်ရွယ်ချက်မှတော့ မရှိပါဘူး။ တခြားသူနဲ့ ခံစားမျှဝေရုံ သက်သက်ပါပဲ။ " လို့ ဖြေခဲ့ပါတယ်။နိုင်းနိုင်းစနေရဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သက် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဘလော့ဂါတစ်ဦးက တော့ " မနိုင်းနိုင်းရဲ့ စာတွေကတော့ ဒီနေ့လူငယ်တွေ အကြိုက်ဆုံးပဲ... အထူးသဖြင့် ဘာသာပြန်တွေပေါ့.. မနိုင်နိုင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဘာသာပြန်တွေကို အသားပေးရေးတယ်လေ.. သူ ဘာသာပြန်ထားတဲ့ တရုတ်စာပေတွေက လူငယ်တွေအတွက် သိပ်ကို တန်ဖိုးရှိတယ်.. အထူးသဖြင့် သူ့စာတွေကို လူငယ်တွေ ပိုကြိုက်ကြတယ်... အင်္ဂလိပ်စာ ဆိုတာက လူတိုင်း သင်လာတာဆိုတော့ မလက်ဖူးလေ.. တရုတ်စာ ကျတော့ ခက်လည်းခက်တယ်.. လူတိုင်းလည်း မသိကြဘူး.. ပြီးတော့ တရုတ်က စာရေးစရာတွေနဲ့ အတွေးအခေါ် အရေးအသားတွေက အရမ်းကောင်းကြတယ်.. ဒါတွေကို မနိုင်းနိုင်းက ဘာသာပြန်ပြီး စာဖတ်သူအားလုံးက လိုက်ပြီး အတုယူတာပေါ့.. အများကြီး အကျိုးရှိပါတယ်... တကယ်ကောင်းတဲ့ ဘလော့ပါ.." လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ ထူးချွန်ပုံနဲ့ စင်္ကာပူရောက်မြန်မာ အားလုံးနီးပါးက တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ လက်အောက်မှာ ကျွန်ခံနေရပုံကို စင်္ကာပူရောက် မြန်မာ အလုပ်သမားတစ်ဦးက အခုလို ပြောခဲ့ပါတယ်..။"ဒီမှာတော့ အလုပ် ကြီးကြီးမားမားတွေရဲ့ ၇၀ ရာခိုင်နှုံးက တရုတ်တွေ ပိုင်တယ်.. စင်္ကာပူ လူမျိုးဆိုတာကလည်း တရုတ်နဲ့ မထူးဘူး.. မဟာရာန ကိုးကွယ်ကြတယ်.. ကွိင်ရင် မယ်တော် ကိုးကွယ်ကြတယ်... စလုံးက မြန်မာ အားလုံးနီးပါးက တရုတ် လက်အောက်မှာပဲ ပျော်ပျော်ကြီး ကျွန်ခံနေကြတာပဲ..." လို့ ပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာ စာပေပညာရှင်ပေါင်းများစွာကို မွေးထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး တရုတ်ပညာရှင်တွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေက တကမ္ဘာလုံးကို ပျံ့နှံ့နေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ဘလော့ဂါ တစ်ဦးကပဲ အခုလို ဆက်ပြောပါတယ်။"တရုတ်က ဟိုး ရှေးခေတ်ကတည်းက အစဉ်အလာနဲ့ တော်တာဗျ..ဒဿန ပညာရှင်တွေ အများကြီးပဲ။ ကမ္ဘာကျော်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းတွေလည်း အများကြီးပဲ.. ဥပမာ Whose cheese can i move ဆိုတာမျိုးပေါ့... အရမ်းကောင်းပြီး လူတိုင်းဖတ်သင့်တယ်လေ... တရုတ်အတွေးအခေါ်တွေက တကမ္ဘာလုံးက အတုခိုးရလောက်တယ်.. မနိုင်းနိုင်းလို တစ်ယောက် ရှိတော့ မြန်မာတွေလည်း ပြန်အတုခိုးလို့ ရတာပေါ့.." လို့ ဆက်ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း တရုတ်စာတွေကို ဘာသာပြန် တင်တဲ့ နိုင်းနိုင်းစနေ ဘလော့ဟာ လူကြိုက် အများဆုံး ဘလော့တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အင်တာနက် သုံးစွဲသူတွေဆီက ဆန္ဒမဲကောက်ယူပြီးရွေး ချယ်ခဲ့ဘလော့အကယ်ဒမီ ဆုတောင်ရခဲ့သေးတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဘလော့ရေးနေရာကနေ စာအုပ်ထုတ် ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်းနိုင်းစနေက"စာအုပ်ထုတ်ထားတာ လောလောဆယ် ၁၀ အုပ်ရှိခဲ့ပါပြီ။ ဘလော့ထဲကစာတွေကိုပဲ စာအုပ်အနေနဲ့ ပြန် ထုတ်ထားတာပါ။ အွန်လိုင်းစာဖတ် ပရိသတ်က အခုပဲ ဘလော့မှာ ကျွန်မ စာတစ်ပုဒ်တင်လိုက်တယ်။ အခုပဲ အ ပြင်အဆင်မရှိတဲ့ စာကို (ဆင်ဆာ မတင်တဲ့စာ) သူတို့ လာဖတ်နိုင်တယ်။ သူတို့ခံစားချက်ကို ချက်ချင်းချရေးခဲ့နိုင်တယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာတော့ စာရေးသူနဲ့စာဖတ်သူ တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံနိုင်တယ်၊ စာတွေကို အခမဲ့ ဖတ်နိုင်သလို ထင်မြင်ချက်ကိုလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် ချရေးခဲ့နိုင်တာပေါ့။ ပြင်ပစာဖတ်ပရိသတ်က စာရေးသူနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရတာမျိုး မရှိ သလို စာအုပ်ဖတ်ချင်ရင် ၀ယ်ရတယ်၊ ငှားရတယ်။ နောက်ပြီး စာရေးသူကို ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် မပေးနိုင်တာမျိုးပေါ့။ စာ အုပ်ထုတ်ဖို့က ထုတ်ဝေသူတစ်ယောက် နဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က မိတ် ဆက်ပေးတယ်။ ထုတ်ဝေသူကလည်း အရင်ကတည်းက ကျွန်မ ဘလော့ကို ၀င်ဖတ်ဖူးတယ်၊ စာတွေကို ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ ထုတ်ဖြစ်သွားတာပါ။ ဘလော့မှာ ကိုယ်ရေးထားတဲ့စာကို ပုံနှိပ် စာအုပ်အဖြစ် ခိုင်ခိုင်မာမာ ထုတ်ဝေခွင့်ရတော့ ၀မ်းသာတာပေါ့...။" ပြောပါတယ်။နိုင်းနိုင်းစနေရဲ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကတော့အမည် နိုင်းနိုင်းစနေမွေးနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၈ရက်လူမျိုး လားဟူဘာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာဇာတိ တောင်ကြီးမြို့ ဖြစ်ပါတယ်...။ထုတ်ဝေထားပြီး စာအုပ်များ ကတော့(၁) အမေ့လက်ရေးစာစုများ(၂) ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်အမှတ် အောင်မြင်သူရဲ့လမ်း(၃) လင်းလက်တဲ့ ချစ်မီးအိမ်(၄) ဟိုတုန်းက အမှတ်တရ(၅) စမ်းချောင်းလေးရဲ့ခရီးစဉ်(၆) ဥယျာဉ်ထဲက ပန်းတစ်ပွင့်(၇) မေတ္တာတို့ ပေါင်းစုရာ(၈) ရတနာများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း(၉) သတ္တိရှိတဲ့ ပထမခြေလှမ်း(၁၀) နှလုံးသားဝန်ဆောင်မှု(၁၁) ကျွန်မဖတ်ဖို့ တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်....။ Myanmar Express
ကြီးဒေါ်စုသို့ ပေးစာ ... (ပေးစာ - ၂၅)
“မတရားတဲ့ အမိန့်အာဏာဟူသမျှ တာဝန်အရ ဖီဆန်ကြ” ကြွေးကြော်သံကို အာပေါင်အာရင်းသန်သန် ကြွေး ကြော်ခဲ့ပြီးသကာလ အနှစ်နှစ်ဆယ်မျှကြာသောအခါ ဒီချုပ်ခမျာ ပါတီမသေရေးအတွက် ဘာမဆိုလုပ်မယ်ဆို တဲ့ အဆင့်ကို ရောက်နေပါပကောလား။ ဘာမဆိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စကားက ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်လေ။ နောက်ပြီး ဒါက ကိုယ့် Own Tune ဖြစ်နေတယ်။ ဘာမဆို လုပ်မလုပ်တော့ မသိသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ဇော် ဇော့်ဘောပွဲဆီသွားပြီး ဘောပွဲလက်ချာတော့ သွားယူပြီးသွားပြီ။ ဟိုး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်က ဘီဘီစီ က ဦးအောင်မြင့်ထွန်းက ဗိုလ်စောမောင် န၀တနဲ့ ဒီချုပ်အနေအထားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ဒီတော့ ဘောလုံးက ခု ဘယ်ဘက်မှာလဲ” လို့ မေးတော့ “ကျမက ဘောလုံးအကြောင်း နားမလည်ဘူး” ဆိုပြီး ဘုကလန့် ပြန်ဖြေဖူး တာ အမှတ်ရမိတယ်။ ခု ဇော်ဇော့်ဆီက ဘောလက်ချာ လာယူတော့မှပဲ ဒေါ်စုနှယ် ဘောစည်းကမ်း နားလည် ဖို့ ဘာ့ကြောင့် နှစ်နှစ်ဆယ်စောင့်ရသလဲဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်မိတယ်။ခုထိတော့ ဘာမဆို လုပ်တဲ့အဆင့်တော့ မရောက်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဟိုဟာ ကောင်းနိုး၊ ဒီဟာ ကောင်းနိုး လုပ်မိလုပ်ရာ လုပ်နေပုံရတာတော့ အသေအချာပဲ။ ဧည့်သည်ကို စစ်မှန်တဲ့စေတနာနဲ့ ဧည့်ခံချင်ပေမယ့် ဟင်း မချက်တတ်တော့ ဟိုဟာလေး ခပ်လိုက်၊ ဒီဟာလေး ခပ်လိုက်နဲ့ နောက်ဆုံး ဟင်းအိုးပျက်ကိန်းဆိုက်မယ့်ပုံ မြင်နေမိတယ်။ ကဲပါလေ … စကားတန်ဆာဆင်နေတာတွေကို အသာထားပြီး ပြောချင်တာပြောပါမယ်။ ပြော ချင်တာထက် မေးချင်တာလို့ ပြောရင် ပိုမှန်မယ်။ နေပြည်တော်စစ်အုပ်စုက သူတို့ရည်မှန်းတဲ့ အနာဂတ်မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဒီချုပ်ကို နေရာပေးဖို့ လုံးဝစိတ်ကူးမရှိပါဘူး။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ စစ်အုပ်စုက သူတို့သဘောထားအစစ်အမှန်ကို အတိ အလင်း ထုတ်ဖော်အသိပေးပြီးသားပဲ။ နိုင်ငံတကာက ဖိအားလည်း ခုထက် ကိုယ့်ဘက်မှာ ပိုပြတ်ပြတ်သား သားရှိနေချိန်၊ နောက် ဘုန်းကြီးတွေ အသေခံ လမ်းပေါ်ထွက်လာပြီး သူတို့လုပ်ဆောင်နေတာကို ကန့်ကွက် အရေးဆိုတုန်းကတောင် မမှုခဲ့တဲ့ စစ်အုပ်စုက ကနေ့လို ယန်းကီးတွေ ရွှေလမ်းငွေလမ်းဖောက်ဖို့ အားသန်နေ ချိန်၊ ဒီချုပ်တောင် တရားဝင်ပါတီအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် မရပ်တည်နိုင်တော့တဲ့အချိန်၊ ကျားသနားမှ နွားချမ်းသာရ မယ့်ဘ၀ကို ရောက်နေချိန်မှာ သူတို့စစ်အုပ်စု လက်တဆုပ်စာကောင်းစားရေး ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ပေးဖို့ ချော့မော့ တောင်းဆိုတာကို အရေးစိုက်မယ်လို့ ဘာ့ကြောင့် ယုံကြည်ရသလဲ။ တကယ်တော့ စစ်အုပ်စုက အနာဂတ်နိုင်ငံရေးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေရာပေးရင်တောင် သူတို့ရဲ့ စစ်ကျွန်သက်ရှည်ရေးစီမံကိန်းမှာ အဖြည့်ခံအဖြစ် အသုံးတည့်လိုတည့်ငြား သုံးဖို့လောက်သာ စဉ်းစားတာပဲ။ အစကတော့ စစ်အုပ်စုက နေ၀င်းမောင်တို့လို ချေးထုပ်တွေ၊ တတိယအုပ်စုလို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ အင်အားစု တွေကို ဟန်ပြအတိုက်အခံအဖြစ် တင်ပြီး ဒီမိုကရေစီအင်ထုရေးစီမံကိန်းကို ဖော်ဖို့ကြိုးစားကြည့်တယ်။ ဒါပေ မယ့် ပြည်သူလူထုက ဒီကောင်တွေကို လုံးဝနေရာအယူမခံဘူး။ ဒီတော့ တတိယအုပ်စုတွေနေရာကို ဒေါ်စုကို အစားထိုးလို့ ရလိုရငြား ကြိုးစားကြည့်တဲ့ အမေရိကန်တို့ အီးယူတို့လည်း တဘက်က ဒီမိုကရေစီ အတင်း အော်နေပြီး တဘက်က လူထုချဉ်တဲ့ကောင်တွေကို တင်ဖို့ စီမံကိန်းကို လက်လျှော့လိုက်ပုံရတယ်။ ဒီတတိယ အုပ်စု အတိုက်အခံအတုကို ပြည်သူလူထုအများစုကြီးက ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ပြနိုင်တာမို့ ပြည်သူလူ ထုက တာဝန်ကျေတယ်။ အတိုက်အခံအတုလို့ လူထုမြင်နေတဲ့အုပ်စုနဲ့ စခန်းသွားလို့မရတော့ လူထုက သူတို့ကို တကယ်ကိုယ်စားပြု တယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့၊ သွားမရှိတဲ့ ကျားဘ၀ရောက်နေတဲ့၊ ပါတီမဖျက်ရင် တော်ပါပြီ ဘာလုပ်ရ လုပ်ရ လုပ်ပါ့မယ်လို့ ပါးစပ်က ထုတ်မပြောပေမယ့် လက်တွေ့မှာ ဒီပုံစံအတိုင်း သွားနေတဲ့ ဒေါ်စုနဲ့ ဒီချုပ်ကို စစ်အုပ် စုက သူတို့စီမံကိန်းအတွက် အသုံးတည့်မယ်လို့ တွက်မိနိုင်စရာရှိတယ်။ ငါးကြင်းဆီနဲ့ ငါးကြင်းကြော်တယ်ပဲ ခေါ်ခေါ်၊ ဒေါ်စု ပြောနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီအင်ထုရေးစီမံကိန်း ပီပြင်အောင် ဒေါ်စုနဲ့ ဒီချုပ်ကို ရက်ရက်စက်စက် ၀င်အသုံးတော်ခံခိုင်းတာပဲ။ အဖြည့်ခံဘ၀နဲ့ လှုပ်ရှားနေရတာကို တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် တခုခုလုပ်နေတာ ပါလို့ ပြောနေတာဟာ (တိုင်းပြည်အတွက် အသုံးချခံရတယ်ဆိုရင် ခံမှာပဲဆိုတဲ့ သဘောရောက်တဲ့ အပြော ပြောခဲ့တယ်မလား) တကယ်ကို အဲသလို ယုံကြည်လို့ ပြောနေသလား၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကို ကိုယ် တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားတရားထူထောင်နေတာလား။ ခုဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်တာ တနှစ်ပြည့်တော့မယ်။ ဒီတနှစ်အတွင်းမှာ ဒီချုပ်ဘက်က ဘယ်လို အကျိုးအမြတ်တွေ ထွက်ခဲ့သလဲ၊ ဘာတွေ ပေးဆပ်လိုက်ရလဲဆိုတာ ပြန်ကြည့်ဖို့ ကောင်းတယ်။ စစ်အုပ်စုက ပိုတောင်အခြေကျလာ၊ ကိုယ်က သူတို့လိုသလို ကစားပေးနေရတဲ့အဖြစ်ကနေ တက်မလာဘဲ တဘက်မှာ ကိုယ့်ကို တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ထောက်ခံတဲ့သူတွေဆီက ထောက်ခံမှုက အရင်ကလောက် မပြတ်သားတော့ တာသာ အဖတ်တင်ကျန်ရစ်တယ်။ တခုတော့ရှိတယ်၊ ဗမာတွေထဲမှာ ဒီချုပ်ကို မျက်စိမှိတ်ထောက်ခံရုံ၊ အမေ စု ဘာလုပ်လုပ် ထောက်ခံတယ် ပြောရုံနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ နိုင်ငံရေးတာဝန်ကျေပြီလို့ ခံယူထားတဲ့ လူတွေတော့ ရှိ တယ်။ ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်ပုံမရတဲ့ ကိုယ်လက်ခံထားတဲ့ အရာတခုကို သတ္တိရှိရှိ မစစ်ကြောရဲတဲ့ ဒါမှမဟုတ် ဒါမျိုးစစ်ကြောရမှာ ပျင်းတဲ့ လူစားမျိုးတွေဆီကတော့ ထက်ထက်မိုးဦးကို ထောက်ခံသလို ထောက်ခံမှုမျိုး ဆက်ရနေဦးမှာပဲ။ ဗမာပြည်မှာ လူတချို့အတွက်က နိုင်ငံရေးတာဝန်ကျေမကျေကို စစ်တမ်းကောက်တဲ့အခါ box-ticking လုပ် သလိုလုပ်ပြီး သတ်မှတ်နေသူတွေ အများကြီးပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံတယ်၊ တရုတ်ကို ဆဲ တယ်၊ ခြေလေးချောင်း ကောင်းတယ်၊ ခြေနှစ်ချောင်း မကောင်းဘူး၊ အမေရိကန် ဘာလုပ်လုပ် ကောင်းတယ်၊ တရုတ် ဘာလုပ်လုပ် မကောင်းဘူးလို့ လှေနံဓားထစ်မှတ်ပြီး အမေစု၊ အမေစုနဲ့ အော်နေရရင်ကို ကိုယ့်နိုင်ငံ ရေးတာဝန်ကျေပြီလို့ ခံယူထားသူတွေ အများကြီးပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်က ပြည်သူလူထုကို သူဘာလုပ်လုပ် သူ့ကို ထောက်ခံမယ့် ပရိသတ်အဖြစ် သာ အလိုရှိတယ်ဆိုရင်တော့ သူနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ ပြည်သူလူထုကိုပဲ ရမှာပဲ။ ဒီလိုပြောတာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်ကို စုံကန်ဖို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ကနေ့အချိန်အထိ သူ့ကို ဗမာပြည်သူလူထုရဲ့ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားဆဲပဲ။ သူဟာ ဗမာပြည်သူလူထုအပေါ် စေတနာရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်း ယုံပါတယ်။ ပြည်သူ လူထုကို ရဲဘော်ရဲဘက်အချင်းချင်း သစ္စာဖောက်မယ့် လူမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်း ယုံတယ်။ နောက် သူတ ယောက်တည်း လုပ်လို့မရဘူး၊ ဒီမိုကရေစီ တကယ်လိုချင်သူတွေအားလုံး ၀ိုင်းလုပ်မှ ရမယ်လို့ ပြောတာကို လည်း သဘောတူတယ်။ ဒါပေမယ့် တဘက်မှာ သူ့ဘက်က ပြည်သူလူထု ကိုးစားလောက်တဲ့ ဉာဏ်အမြော် အမြင်နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ခေါင်းဆောင်ပီသအောင် နေပြဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ဇော်ဇော့်ဘောလုံးပွဲ သွားကြည့်ဖို့ ဘယ်လို စဉ်းစားဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာ နားလည်လို့မရဘူး။ သူ့ဘက်က ဘယ်လိုမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ သွားလဲဆိုတာ သူပဲသိမှာပဲ။ စစ်အုပ်စုနဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့နဲ့ ဇော်ဇော့် ဆီသွားအသုံးတော်ခံတာ ဘယ်လိုဆက်စပ်မှုရှိလဲဆိုတာ မေးဖို့ကောင်းတယ်။ ဒီလိုသွားတာကို သူ့ကိုထောက် ခံတဲ့ ပြည်သူလူထုစိတ်ထဲ ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာ စဉ်းစားရဲ့လား။ ဆီနိတ်တာခင်ရွှေက သူ့မြရိပ်ညိုမှာ အနှိပ် သမလေးတွေကို ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ အလုပ်အကိုင် ဖန်တီပေးနေတယ်ဆိုတာကို လာကြည့်လှည့်ပါဆို သွား ကြည့်ဦးမှာလားဆိုတာ မေးပါရစေ (ဒေါ်စုကိုယ်တိုင် အထေ့အငေါ့လေးတွေ သုံးတတ်တော့ ကိုယ့်ကို အဲသ လို ထေ့လုံးငေါ့လုံးလေးတွေနဲ့ မေးလာရင်လည်း ဗွေမယူလောက်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်)။ နောက် ဒေါ်စုကို ဝေ ဖန်တယ်ဆိုတာ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်လို့ သဘောထားလို့ ဝေဖန်တာပဲ။ မက်ဒေါနားလို မြင်ရင် ခုလို ဝေဖန်စ ရာ မရှိပါဘူး။ ပါတီတည်မြဲဖို့ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို လက်ခံသဘောတူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အန်အယ်လ်ဒီဟာ ဘယ်လို values တွေကို ကိုယ်စားပြုထားသလဲဆိုတာ မေးပါရစေ။ အဲဒီ values တွေ ပျောက်ပြီးသကာလ ဒီ values တွေကို ကိုယ်စားပြုထားတဲ့အဖွဲ့ကြီး ဆက်ရှိနေတယ်ဆိုတာ အဓိပ္ပာယ်ရောရှိပါသေးရဲ့လား (တကယ်က တီ တီစု၊ တီတီစု သားတို့မသိလို့ မေးပါရစေ၊ လွတ်လပ်မှုအတွက် လွတ်လပ်မှုကို စတေးမလား၊ အဲသလို စတေး တာ မှန်သလားလို့ မေးချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမေးခွန်းက မလိုအပ်ဘဲ မက်တာဖစ်ဆစ်ကယ် ဖြစ်တော့ ဖီ လော်ဆော်ဖီ သောက်မြင်ကပ်တဲ့ ပရိသတ်ကို ထောက်ချင့်ပြီး မမေးတော့ပါဘူး)၊ လှေခွက်ချည်းကျန် အလံမ လှဲစတမ်း တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ လေးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တိုက်တင်းနစ် အရွယ်အစားရှိခဲ့တဲ့ သင်္ဘောကြီးကနေ လှေခွက်ပဲကျန်တဲ့ဘ၀ ရောက်သွားရတာမှာ မာလိန်မှူးတွေကို ပေးချင်တဲ့ အကြံကတော့ မက်ခီယာဗယ်လီကို ပြန်သာဖတ်ပါလေလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်စုက ပြည်သူလူထုဆီက သူတို့ဘာလုပ်လုပ် ထောက်ခံတာမျိုးသာ လိုချင်ပုံရပါတယ်။ တကယ်တမ်းမှာ သူတို့အားကိုးပုံရတာက အနောက်အုပ်စုကပေးတဲ့ ဖိအားပဲ။ အဲဒီဖိအားနဲ့ ဒီမိုကရေစီတကယ်ရမယ်လို့ ယုံခဲ့ပုံ ရတယ်။ ဒါ ကျုပ်အမြင်ပါ။ မှားချင်လည်း မှားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခု သူအားကိုးခဲ့တဲ့ ယန်းကီးတို့ကိုယ်တိုင် က သူ့အတွက် ရွေးစရာလမ်းကြောင်းတွေကို တခုပြီးတခု ပိတ်နေတော့ ခမျာ လုပ်မိလုပ်ရာ လုပ်သလိုဖြစ်နေ ပြီ။ နေပြည်တော်စစ်အုပ်စုက အရပ်သားအစိုးရ နာမည်ခံရုံခံတာကို ယန်းကီးတို့ မသိဘဲ ဘယ်နေမလဲ။ ဒါပေ မယ့် စစ်အုပ်စုနဲ့ အတင်းလုံးချင်တော့ တိုင်းပြည်ထဲ တကယ့်အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်နေတဲ့ပမာ ဒေါ်စုကိုပါ သူတို့အကဲဖြတ်ချက်ကို အတင်းအကျပ် လက်ခံခိုင်းပုံပေါက်နေတယ်။ ဒီတော့ ဒီချုပ်အနေနဲ့ ဒါကို လက်ခံ မယ်၊ လက်မခံဘူးဆိုတာ ပြတ်ပြတ်သားသားတခုခုပြောပါ မေးလာရင် ဘယ်လိုဖြေမှာလဲဆိုတာလည်း သိချင် ပါတယ်။ ကဲ ဒီလောက်ပါပဲ ဂျီးဒေါ်စုရေ … ၀တုတ်http://zizawa.wordpress.com/2011/09/15/%E1%80%82%E1%80%BB%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%93%E1%80%B1%E1%80%AB%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%AF%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B7-%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC/
ပြည်ပမှဒီမိုယောင်ယောင်လုပ်စားများကိုမြန်မာ့လူမှုရေးနယ်ပယ်တွင်စိတ်ကူးဖြင့်ပုံဖေါ်ကြည့်ခြင်း။ ( ၁ ) (ပေးစာ - ၂၄)
အင်တာနက်ပေါ်မှနိုင်ငံရေးအတိုက်အခံဒီမိုယောင်ယောင်လုပ်စားများရေးထားသောသီတင်းများကိုဖတ်ပြီးအတွေးတခုရလာပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကိုချစ်ပါတယ်လို့အော်နေကြတဲ့ပြည်ပမှအတိုက်ခံလုပ်စားများကိုမြန်မာပြည်တွင်းရှိလူမှုနယ်ပယ်များသို့ စိတ်ကူးဖြင့်ပို့ ကြည့်တဲ့အစီစဉ်ပါပဲ ။ ပထမဦးစွာ ပြည်တွင်းရှိလူအတော်များများစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်နယ်ထဲကိုပို့ ကြည့်ပါတယ် ။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ယခုချိန်ကိုရီးယားဇတ်လမ်းတွေအကြိုက်များပြီးမြန်မာဇတ်လမ်းတွေဇတ်ရှားနေတယ်လို့ဝေဖန်သံကြား နေရတဲ့အတွက်ဇတ်လမ်းဆင်ကောင်းသော ဇတ်လမ်းလုပ်တာတော်သောပြည်ပအတိုက်ခံများကိုဇတ်လမ်းသစ်တွေဖန်တည်းပေးနိုင်မလားဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပါ ။ သို့သော်လည်းရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိတ်သတ်က ဇတ်သိမ်းခန်းကိုကြိုတင်မှန်းဆလို့ရနေသော သူတို့ ရဲ့လုပ်ဇတ်လမ်းများကိုမနှစ်သက်နိုင်ပါဆိုသဖြင့်နောက်ထပ်အငြိမ့်လူရွှင်တော်လောကသို့ ထပ်ခေါ်ဆောင်သွားကြည့်ပါတယ် ။ သို့သော်လည်း အငြိမ့်ပရိတ်သတ်များက သူတို့ ရဲ့ရယ်စရာမကောင်းသောအင်တာနက်ပေါ်မှပေါတောတောပျက်လုံးများကိုအော့နှလုံးနာနေသဖြင့် လက်မခံသောကြောင့် ပြည်ပလုပ်စားများလည်းထိုလောကတွင်အလုပ်မဖြစ်အသုံးမဝင်နိုင်ပေ ။ ထို့ကြောင့်ထိုဒီမိုဗန်းပြလုပ်စားအဖွဲ့ အားမြန်မာဘောလုံးလောကဆီသို့ခေါ်သွားမိပြန်သည် ။ အလိမ်အခေါက် ပညာများနှင့်ဘောလုံးကွင်းမှာအလုပ်ဖြစ်မလားလို့ ပါ ။ သို့ သော်ဘောလုံးပရိတ်သတ်များကလဲအပေးအယူမလုပ်ပဲတကိုယ်ကောင်းဆန်လိမ်ခေါက်ပြီးအမြဲဟန်ဆောင်ဒိုင်ဗင်ထိုးပြတက်တဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကြောင့်သူတို့ကိုလက်မခံပေ ။ ထို့ ကြောင့်စိတ်ကူးထဲမှ နောက်တနေရာဖြစ်သောမြန်မာ့လက်ဝှေ့ လောကသို့ ထပ်ခေါ်သွားပြန်ရာတွင်လည်းလက်ခမောင်းခတ်ဟန်ရေးပြရုံသာရပြီးတကယ်တန်းကျတော့ကြိုးဝိုင်းထဲပတ်ပြေးပြနေသောကြောင့်ဝိုင်းမောင်းထုတ်လိုက်လေသည်။ ထိုမှတဖန်ကျနော်လည်း အားမလျှော့ပဲထိုလူများကိုဘုရားရိပ်တရားရိပ်ဘုန်းကြီးကျောင်းခေါ်သွားပြန်သည် ။ ထိုအခါတွင်လည်းထိုဒီမိုလုပ်စားများကဘာသာရေးဗန်းပြနိုင်ငံရေးလုပ်စားရန်ကြိုးပမ်းသောကြောင့်ကျန်ကိုယ်တော်များအကျင့်ပျက်စေနိုင်သဖြင့် ဘာသာရေးနယ်ပယ်တွင်လည်းနာမည်ဆိုးဖြင့်အလုပ်မဖြစ်ပြန်ပေ ။ကျနော်လဲဇွဲမလျှော့သေးပဲဘောလုံးကန်ရာတွင်အလုပ်မဖြစ်သော်လည်းဆဲသည့်နေရာမှာကျွမ်းကြင်ကြသောဒီမိုလုပ်စားများကိုဘောလုံးပရိတ်သတ်လုပ်ခိုင်းကြည့်ပြန်သည်။ သို့ သော်ကျန်ပရိတ်သတ်များကဘောလုံးပွဲတွင်ဘောလုံးပွဲနှင့်မဆိုင်တာတွေစွဲစွဲထည့်ပြီးအရူးလိုစွတ်ဆဲနေသဖြင့်မောင်းထုတ်လိုက်ကြပြန်သည်။။။**** ကျနော်လဲထိုပြည်ပမှဒီမိုနာမည်ခံလုပ်စားများကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်မည်သည့်နယ်ပယ်တွင်အသုံးတည့်မည်နည်းဟုစဉ်းစားရင်းစဉ်းစားရင်းမောလာသောကြောင့်ဒီနေ့ တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်လိုက်တော့မယ်ဗျာ ။။ နောက်နေ့ မှတခြားနယ်ပယ်တွေမှာရောအသုံးတည့်မလားလို့ ထပ်ခေါ်သွားကြည့်ပါဦးမည် ။ ဒီနေ့ခေါ်သွားတဲ့နေရာတိုင်းကတော့သူတို့ နဲ့ အလုပ်မဖြစ်ဘူးဗျို့ ..ဘာမှအသုံးပြုလို့ မရဘူးဗျာ ။ မြန်မာ့လူမှုရေးနယ်ပယ်မှာသူတို့ နဲ့အဆင်ပြေမယ့်နေရာလိုက်ရှာကြည့်ပါအုန်းမယ်ဗျာ...။( ကိုခိုင်ဇော်ရေးသားသည်)
လွတ်တော်အမတ်ဖြစ်ဖို့အရေး ပွဲလန့်တုန်း ဖျာဝင်ခင်းတဲ့ ဦးဝင်းချို
ဦးဝင်းချိုဟာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အရ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ လွတ်တော်အမတ် ဖြစ်ဖို့အရေး စိတ်ကူးရင်ကာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒလ မြို့နယ်မှ တသီးပုဂ္ဂလအနေနဲ့ ဝင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ခပ်ကြောင်ကြောင် အတွေးတွေကြောင့် ဘယ်ပါတီနဲ့မှ အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတာ သိတာကြောင့် တသီးပုဂ္ဂလအနေနဲ့ပဲ တစ်ကောင်ကြွက် ဝင်ပြိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း မဲထည့်တဲ့လူ မရှိလို့ ဝက်ဝက်ကွဲကောင် ရှုံးပြီး လွတ်တော်အမတ်မင်းဖြစ်ရေး အိပ်မက်ကြီး ပျက်ပျယ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်း ဇွဲမလျှော့နိုင်သေးပဲ မသေခင် လွတ်တော်အမတ်ဖြစ်ရေး မျှော်တွေးကာ နောက်ထပ် ၂၀၁၅ မှာ လုပ်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲရရှိရေးအတွက် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို အမြဲ စဉ်းစားနေတတ်ပါတယ်။ လူမိုက်ကံကောင်း ဆိုသလိုပဲ ခေါင်းစဉ်ရှာနေတဲ့ ဦးဝင်းချိုအတွက် ဧရာဝတီ ရောဂါ က အကောင်းဆုံး ခေါင်းစဉ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဧရာဝတီ ရောဂါပျံ့နှံ့ကာ ပွဲလန့်နေတုန်းမှာပဲ ဦးဝင်းချိုတစ်ယောက် ဖျာခင်းဖို့ ဖျာလိတ်ထမ်းကာ ပြေးဝင်လာပါတော့တယ်။အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်းက မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း က အမျိုးသား အကျိုးစီးပွား တိုးတက်စေတာကြောင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မယ်လို့ ပြောခဲ့တာကို နိုင်ငံတော် ပုန်ကန်မှု တစ်ခုအသွင် ဖန်တီးကာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ထဲက အခန်း တွေ၊ ပုဒ်မ တွေတပ်ပြီး အရေးယူဖို့တောင် ပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ဦးဝင်းချို ကို မေးမြန်းချိန်မှာလဲ လူအများက မကြိုက်တာကြောင့်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ခုချိန်မှာ ဦးဝင်းချိုရဲ့ အလုပ်က လူတွေဘာကြိုက်လဲ၊ လူတွေ ကြားမှာ ဘာအကြောင်းတွေ ပြောနေလဲဆိုတာ စုံစမ်းပြီး ပရိတ်သက်အကြိုက် လိုက်ကာ ၂၀၁၅ မှာ ထောက်ခံမဲ ရဖို့အရေး ကြိုးစားဖို့ပါပဲ။ ဦးဝင်းချိုရဲ့ ဒီလုပ်ရက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ဝင်ပြိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက အခုလိုပြောပါတယ်။"အထူးပြောစရာမလိုပါဘူးဗျာ... သူမဲလိုချင်လို့ လုပ်နေတာ သိသာနေတာပဲ.. အပေါစားစည်းရုံးမှု ဆိုတာ ဒါမျိုးပဲဗျ.. ၁၉၉၀ တုန်းကလည်း အဲလိုလူတွေ အများကြီး နိုင်သွားကြတာပဲ... ဦးဝင်းချိုလည်း ဒီ မရိုးနိုင်တဲ့ ပရိတ်သက်အကြိုက်လိုက်၊ ပရိတ်သက် ကြားချင်တာ ပြောတဲ့ နည်းနဲ့ လူထောက်ခံအောင် လုပ်တာပေါ့... ဒါပေမယ့် ဒီခေတ်မှာ ပွဲလန့်တုန်း ဖျာခင်းတတ်ရုံနဲ့ လူတွေရဲ့ ထောက်ခံမှု ရဖို့ မလွယ်ဖူးလေ.. ဒါကြောင့် သူလည်း ခုထိ လွှတ်တော် အမတ်မဖြစ်တာပေါ့... ဒီဦးနောက် ဒီအတွေးအခေါ်နဲ့ ဒီနည်းလမ်းအတိုင်း ဆက်သွားလို့တော့ ... လွှတ်တော်အမတ်မပြောနဲ့ဗျာ... လွှတ်တော် တံခါးစောင့်တောင် ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဗျ.." လို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်သွားပါတယ်။ဒါ့အပြင် ဧရာဝတီ ကို စောင့်လျှောက်ဖို့ထက် သူများကို အရေးယူဖို့ အရင် စဉ်းစားနေတဲ့ ဦးဝင်းချို ကို ရှုံ့ချ ကြသူတွေလည်း အများအပြား ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်က အတိုက်အခံ စာမျက်နှာတွေမှာတော့ ထုံးစံအတိုင်း အရည်အချင်းရှိရှိ ပြန်မပြောနိုင်ချိန်မှာ ပါဆင်နယ်တွေ လျှောက်ပြောပြီး အနိုင်ရဖို့ကျိုးစားနေကြောင်းကို နိုင်ငံခြားမှာ နေပြီး ဧရာဝတီ အရေးလှုပ်ရှားနေသူ တစ်ဦးက "အခုချိန်မှာ အရေးကြီးတာက ဧရာဝတီ ပဲဗျာ.. ဦးဝင်းချို အနေနဲ့ တလွဲကို ဆံပင်မကောင်းသင့်ဘူးလို့ ပြောချင်တယ်ဗျ.. သူက သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းချင်တဲ့စိတ်ထက် သူများကို အရေးယူချင်စိတ်က ပိုများနေသလိုဖြစ်နေတယ်လေ... အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေလည်း အတူတူပဲပေါ့... ဧရာဝတီ ကို ကယ်ကြမယ် အော်ပြီး အရည်ချင်းရှိရှိ ပြန်မဆွေးနွေးနိုင်တော့ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးကို မကျေနပ်ပြီး ပါဆင်နယ်တွေ လျှောက်ပြောနေကြတာတွေ လုပ်နေကြတယ်.. သတ္တိမရှိလို့ လက်နက်ပုန်း သုံးသလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ... အဲဒီ လုပ်ရက်တွေ၊ အဲဒီ စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ နိုင်ငံတော်ကို ကယ်တင်မယ်.. ဧရာဝတီကို ကယ်တင်မယ် ဆိုရင်တော့ ရင်လေးစရာပဲဗျ..." လို့ ပြောသွားပါတယ်။အင်တာနက်ပေါ်က ယောင်္ကျားဆန်ဆန် အရည်ချင်းရှိ ပြန်မဆွေးနွေးကြပဲ အမှောင်ထဲက လက်နက်ပုန်းသုံးကာ မဆိုင်တာ လျှောက်ပြောနေသူများကို အမှတ် (၁) လျှပ်စစ် ဝန်ကြီးက ယောင်္ကျားဆန်ဆန် ဒုတ်ဒုတ်ချင်း၊ ဓား ဓားချင်း သာ ပြန်လည် ယှဉ်ပြိုင်သင့်ကြောင်း ဆုံးမ စကား ပြောခဲ့ပါတယ်။အသက် ၆၀ နီးပါး ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဦးဝင်းချိုဟာ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမှာ ရွှေဆိုင်ဖွင့်ပြီး ကြီးပွားချမ်းသာနေသူဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဝင်းချိုရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အချို့ကတော့ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဧရာဝတီ သတင်းဌာနကတော့ ဦးဝင်းချိုကို ရန်ကုန်တိုင်း ဒဂုံ မဲဆန္ဒနယ် က လို့ မှားယွင်း ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
အမြဲတမ်း ရှင်သန်နေမည့် မြစ်ကြီးဧရာဝတီ နှင့် ဘယ်သူတွေ ဘာလုပ်နေကြသလဲ... ???
အခုတစ်လော အရမ်းပေါ်ပြူလာ ဖြစ်နေတဲ့ ဧရာဝတီကြီး အသက်ငင်နေပီတို့ ဧရာဝတီကို ကယ်တင်မယ်တို့… ဟုတ်ကဲ့ ဘာတွေ ဖြစ်လို့ ဧရာဝတီကြီးက အသက်ငင်နေတာလဲဆိုတာကို မေးတော့…..မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို တစ်ချို့လူတွေက မြစ်ကြီး ပိတ်ပြီးဆည်ဆောက်မှာတဲ့ တစ်ချို့ကလဲ ပြောသေးတယ်.. နေရာအတိအကျမသိပဲ မြစ်ဆုံမှာ ဆည်ဆောက်မှာတဲ့ တစ်ချို့ကလဲ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်မို့ မရင်းနိုင်ဘူးတဲ့… တစ်ချို့ကလဲ မြစ်တိမ်ကောလာပြီး ဖြစ်ကြောင်းထဲက ငါးတွေ သေမယ်… သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေ ရှုံးမယ်တဲ့၊ တစ်ချို့ကလဲ ဘာပဲပြောပြော ဘယ်လိုပဲ ရှင်းပြ ရှင်းပြ သူတို့က ဧရာဝတီမြစ်ကြီး သေမယ်ဆိုတာချည်းပဲ… အောင်မယ် Save The Irrawaddy ဆိုပြီး တီရှပ် ထုတ်ရောင်းစားလိုက်သေးတယ်… ပြီးတော့လဲ ပြောကြသေးတယ်… သူရဲကောင်းတွေပေါ့... များလိုက်တဲ့ သူရဲကောင်းတွေ မြန်မာမှာ သူရဲကောင်းတွေ ပေါတာ တကယ် မယုံမရှိနဲ့... ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို ကယ်ကြမယ့် သူရဲကောင်းတွေ အလျှိုအလျှိုပဲ... သူတို့ကပြောကြသေးတယ် ဧရာဝတီမြစ်ကြီးသေရင် မြန်မာပြည် ဒုက္ခရောက်ပီတဲ့ ကယ်တင်ရမယ်တဲ့… သူတို့ပဲ သိတယ်ပေါ့လေ… မသိရင်… သူတို့က သူရဲကောင်းတွေပေါ့… ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာ ခံသူကြီးတွေပေါ့… တကယ်တော့ ဧရာဝတီမြစ်ရဲ့ မြစ်ဆုံနဲ့ လေးမိုင်အကွာ ဆည်ရဲ့ စီမံကိန်းမှာဆိုရင် ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို ပိတ်ပြီးဆည်ကြီး တည်တာမဟုတ်ဘူး… အဲဒီအတွက် ကာတွန်းတွေ ရေးဆွဲထားသလို လုံးဝကြီး ပိတ်ဆောက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး… ဧရာဝတီမြစ်မှာ စီးဆင်းတဲ့ရေရဲ့ ၇% ကိုပဲ ဖမ်းပြီး အသုံးပြုမှာပါ… ကျန်တဲ့ ၉၃% ဆက်လက်စီးဆင်း နေတဲ့အတွက် မြစ်ရဲ့ရေစီးကြောင်းက မပြောင်းလဲ ပါဘူး… ရေနည်းနည်းပဲ အလျော့လေးပဲ ရှိတာပါ… ဒါက ဆည်အတွင်း ရေ ၇% ကိုတဖြည်းဖြည်း သိုလ်လောင်နေစဉ် အတွင်းပါ.. တကယ်လို့ ဆည်ထဲမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရေတိုင်းကိရိယာအရ ဆည်ရေ ပြည့်သွားပီ ဆိုရင် လျှပ်စစ်ထုတ်ဖို့ ဂက်စ်တာဘိုင်လို့ ပြောတဲ့အတွက် ဂက်စ်ထည့်ပြီး အဲဒီရေနဲ့ ထည့်မောင်းလိုက်ရင် အဲဒီရေက မြစ်ထဲကို ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်စီးသွားပါမယ်။ အဲဒီနောက် မြစ်ကြောင်းကို ပြောင်းစေမယ့် ဟာတွေက ဘာတွေ ရှိလဲ ဟုတ်ပီ… ရေစီးကြောင်းတွေ ပြောင်းသွားပြီး မြစ်ကမ်းကမ်းကို သွားတိုက်စားရင် မြစ်ကမ်းပါးပြိုမယ် မြစ်ပြင်ကျယ်လာမယ်.. မြစ်တိမ်ပြီး သောင်ထွန်းလာမယ်.. ဒါကြောင့် မြစ်ရေကို ဆည်ထဲကို သိုလ်လောင်ဖို့ ရေသွင်းမြောင်း ချတဲ့အခါပဲ ဖြစ်ဖြစ် မြစ်ထဲကိုတိုင်တွေ ချမယ့် နေရာမှာ.. ရေစီးကြောင်း မပြောင်းလဲမဲ့နေရာ တွေကို တိုင်းတာပြီး ဆောက်လုပ်မှာပါ.. နောက်ပြီး အောက်ခံ မြစ်ပြင် တိုက်စားပြီး တခြားနေရာတွင် အနည်ပို့ချကာ မြစ်ကြောင်း ပိတ်ဆို့ခြင်းမဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ ဆည်ကနေ ၀ုန်းကတဲ့ ရေထွက်တဲ့အခါ အောက်က အောက်ခံမြေသားတွေကို တိုက်စားမသွားအောင်လဲ တည်ဆောက်သွားမှာပါ… နောက်တစ်ခုက.. ဧရာဝတီဖြစ်ထဲကို ဒီ မေခနဲ့ မလိခမြစ်လေး နှစ်သွယ်ကနေပြီး စီးဆင်းလာတဲ့ ရေတစ်ခုတည်းနဲ့ အမှီပြုပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးဟာ ရှင်သန်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး… မြစ်ကြီးငါးသွယ်နဲ့ မြစ်ငယ်ချောင်းငယ် အသွယ်သွယ်တို့နဲ့ စီးဆင်းရှင်သန်နေတာဖြစ်ပါတယ်… နောက်ပြီး တခြား မြစ်ကြောင်း ကျယ်ပြီး မြစ်ရေတိမ်ကာ သောင်မထွန်းစေဖို့ ကမ်းပါးတွ မပြိုစေဖို့ စသည်တို့ကိုလဲ ဆောင်ရွက်သွားဖို့ နိုင်ငံတော်က အစီအစဉ်ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိပါတယ်… ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက ညွှန်ကြားထားတာပါ… (ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်း ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၏ မိခင်ဌာနဖြစ်သည့် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန တစ်ခုတည်းသာ ဆောင်ရွက်ရန်မဟုတ်ဘဲ မြစ်ကြောင်းများ ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန၊ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ၀န်ကြီးဌာန တို့အပြင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်းပေးထားပြီး ဖြစ်သည့် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၊ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကော်မတီတို့ ပူးတွဲ၍ဆောင်ရွက်သွားရန်) ဆိုတဲ့ မြစ်ကြောင်းကြီးတွေကို မပြောက်ပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းအကောင် အထည်ဖော်ပေးမယ့် အစီအစဉ် ရှိပြီး အဖွဲ့တွေဖွဲ့ကာ ဆောင်ရွက်ဖို့ ညွှန်ကြားထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်…. ကဲအဲဒါဆို ဧရာဝတီကို နိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိအောင် အသုံးချပြီး ဘယ်သူတွေ ကာကွယ်မှုတွေလုပ် ကယ်တင်ပြီး ဘယ်သူတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကယ်တင်နေသလဲ ဘယ်သူတွေ စီးပွားရေးတွေလုပ်နေသလဲ ဘယ်သူတွေ ပေါ်ပြူလာဖြစ်အောင် လုပ်နေကြသလဲ… ဘယ်သူတွေ ပြည်သူတွေကို လမ်းပေါ်ထွက် အသေခံကြအောင် လုပ်နေကြတာလဲ ဘယ်သူတွေ လုပ်စားနေကြတာလဲ??? ဆိုတာ သိလောက်ပါပီ…((သွေးသစ္စာ))အိုင်ရာဝတီကို ကယ်တင်ပါ
ဧရာဝတီကို ကယ်တင်ကြမတဲ့လား .......... (ပေးစာ - ၂၆)...
ဒုက္ခသည် စခန်းရောက် မျိုးချစ်ကရင် တစ်ဦးမှ ၂ နှစ် အ...
တရုတ်စာတွေကို ဘာသာပြန် သည့် စာရေးဆရာမ ဘလော့ဂါ နိုင...
လွတ်တော်အမတ်ဖြစ်ဖို့အရေး ပွဲလန့်တုန်း ဖျာဝင်ခင်းတဲ...
အမြဲတမ်း ရှင်သန်နေမည့် မြစ်ကြီးဧရာဝတီ နှင့် ဘယ်သူေ...
အရင်းအနှီး နည်းနည်းဖြင့် ခနောက်စိမ်း ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် နည်းပညာသစ် ပံ့ပိုးပေးမည်
ရန်ကုန် မေ ၂၂ မြန်မာ နိုင်ငံရှိ ခနောက်စိမ်း ထွက်ရှိရာ ဒေသများမှ ဒေသခံများ အလုပ်အကိုင် ရရှိပြီး ရေရှည် လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ခနောက်စိမ်း...
မြို့ပေါ်ရောက်နေသည့် RCSS/ SSA(ရွက်ဆစ်) အဖွဲ့၏ အကြမ်းဖက်မှုအား ဒေသခံ သံဃာတော် များ ပြောပြီ
ဟိုပုံး မြို့နယ် မိုင်းပျဉ်းကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော် ဦးပညာဝံသ၊ ဟဲ ခဲကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှ ဆရာတော် ဦးကုသလ အပါအ၀င် သံဃာ...
မြန်မာနိုင်ငံ အလံကို အလေးမပြုနိုင်ဘူးဟု ကုလားများမှပြော
၁၉-၅-၂၀၁၃-ရက်နေ့ (၁)နာရီမှာ ကျင်းပတဲ့ ပဋိပက္ခမဖြစ်ရေး ဘာသာပေါင်းစုံ အစည်းဝေးပွဲမှာ မူဆလင်အမျိုးသမီး တစ်ယောက်က ပြောတဲ့ စကားလေးက တော်တော်လေး မှတ်သားစ ရာကေ...